I-Alteryx: Ipulatifomu ye-Analytic Process Automation (APA) | Martech Zone
Lapho inkampani yami isiza futhi ishayela uhambo lokuguqulwa kwedijithali ezinkampanini zamabhizinisi, sigxila ezindaweni ezintathu ezibalulekile - abantu, izinqubo, namapulatifomu. Sibe sesakha umbono nomgwaqo wokusiza inkampani isebenzise imishini futhi yakhe ukusebenza kahle ngaphakathi futhi siguqule ulwazi lwamakhasimende ngaphandle.
Ukuzibandakanya okunzima okungathatha izinyanga, kufaka phakathi imihlangano eminingi nobuholi kanye nokuhlaziywa okujulile kwedatha, amapulatifomu, nokuhlanganiswa ibhizinisi elincike kukho. Isizathu esiyinhloko ukuthi idatha idluliselwe phakathi kwalezi zindawo ezintathu.
Yini i-Analytic Process Automation (ACA)?
Inqubo Yokuhlaziya Ezenzakalelayo kumaka ukuvuthwa kwedatha ne-software ye-analytics, ebikade inezimakethe ezihlukile ezibandakanya ama-analytics, ubuhlakani bebhizinisi, isayensi yedatha, namathuluzi wokufunda wemishini. I-APA iguqula izinsika ezintathu ezibalulekile ze-automation kanye noguquko lwedijithali ukunika amandla intando yeningi ye idatha nezibalo, ukuzenzakalela kwe izinqubo zebhizinisi, Kanye ukukhushulwa kwabantu phezulu ngoba ukunqoba okusheshayo futhi imiphumela yokuguqula.
Inqubo Yokuhlaziya Ezenzakalelayo (APA) ubuchwepheshe obuvumela noma ngubani enhlanganweni yakho ukuthi abelane kalula ngemininingwane, enze izinqubo eziyindida nezinzima, futhi aguqule imininingwane ibe yimiphumela. Nge-Analytic Process Automation, noma ngubani angavula ukuqonda okubikezelayo nokuchazayo okuqhuba ukuwina okusheshayo ne-ROI esheshayo.
I-Alteryx, yini i-APA?
I-Alteryx iyipulatifomu ebumbene yezibalo, isayensi yedatha, inqubo ezenzakalelayo, i-autoML, ne-AI:
Okokufaka kwefa okuzenzakalelayo - Imithombo yedatha ehlanganisiwe engama-80 + ukusuka e-Amazon kuya ku-Oracle kuya ku-Salesforce Xhuma ngokuphephile kunombolo engenamkhawulo yemithombo eyengeziwe. Uma ukwazi ukufinyelela kwimininingwane, ungayingenisa ku-Alteryx bese uchitha isikhathi esiningi uhlaziya nesikhathi esincane usesha.
Ikhwalithi yedatha nokulungiselela - Hlola bese uxhuma idatha kusuka kulwazi lwangaphambi kwesikhathi, ifu, namasethi wedatha amakhulu noma amancane nokuningi. Hlanza kalula, lungisa futhi uhlanganise idatha kusuka emithonjeni ehlukahlukene enezikhombi ezihlukile noma ezingenazo ukuletha amaphrofayili wedatha ahlanganisiwe.
Ukunotha kwedatha nokuqonda - Sebenzisa amandla wefu ngamathuluzi we-database aguqula idatha enkulu ibe yimininingwane emikhulu. Dlulela ngale kwedatha ejwayelekile yedemokhrasi ngolwazi lokuthenga nokuziphatha ukuze wenze umbono ojulile futhi uqonde abathengi ngokweqiniso. Thuthukisa ukuhlaziywa kwakho ngamamephu, izixazululo zamakheli, amandla wesikhathi sokushayela, nokuqonda okujulile kwamakhasimende akho nezindawo - ngoba konke kwenzeka kwenye indawo.
Idatha Yesayensi Nezinqumo - Thuthukisa okukhishwayo kweqembu lakho ngemihlahlandlela yezinyathelo nezinyathelo nokusizwa kokumodela ukwakha amamodeli ngaphandle kokufaka amakhodi noma ubuchwepheshe be-analytics. Thola ukuqonda nezimpendulo ezingcono ngokusebenzisa idatha yezindlela eziyinkimbinkimbi zokuhlaziya, kusukela ekuhlaziyweni kwemizwa kwidatha engahlelekile ukwakha amamodeli asuselwa ku-R anamakhono wokufaka amakhodi amancane. Sebenzisa ungqimba lwezobunhloli ngama-analytics athuthukile, njengokufunda ngomshini, ukuze unikeze ukuqonda okubheke phambili.
Imiphumela Yokuzenzakalela - Nika abanye amandla ukwenza ngezifiso noma yikuphi ukuhlaziywa nokwenza izinqumo ngezinhlelo zokusebenza zokuhlaziya. Yabelana ngamafomethi ahlukahlukene njengokubhalela emuva ku-database noma kumaspredishithi we-bot noma we-leveraging noma umbiko okulula ukuwadla. Yakha kanye futhi wenze ngokuzenzakalela unomphela. Xoxa ngempumelelo izimpendulo futhi wabelane ngazo nababambiqhaza ukuze bakwazi ukuthatha isinyathelo, babone okuphumayo, noma benze nama-dashboard alula ku-Alteryx. Khulisa ukukhishwa komuntu futhi unike amandla ukuphuculwa okungapheli kwabantu abanezinqumo ezihlakaniphile zokuletha imiphumela esheshayo, engcono.
Abasebenzisi baqala ngecala lebhizinisi futhi bangakha ngokushesha izibalo, isayensi yedatha, futhi bacubungule imiphumela ezenzakalelayo, ngaphandle kokudinga amakhono athile akhethekile Ezinhlanganweni, umphumela omkhulu we-APA utholakala ezindaweni ezine ezahlukahlukene zembuyiselo yotshalomali:
Ukuguqula Ukukhula Kwe-Top-Line
Ukuguqula Ukubuyiselwa Kwaphansi
Ukuguqula Ukuphumelela Kwabasebenzi
Ukuthuthukisa amakhono abasebenzi bakho
Umthelela owumphumela we-APA imiphumela yebhizinisi esheshayo, izinqubo zebhizinisi ezizenzakalelayo ngokuphelele, kanye nekhono lokusheshisa ngokushesha nokwenza umthelela.
Idemo ye-Alteryx Interactive Isilingo Senyanga engu-1 se-Alteryx
Ipulatifomu ye-Adobe Experience ne-Alteryx
I-Alteryx Analytic Process Automation Platform ne-Adobe Experience Platform inika amandla izinhlangano ukuthi zenze izibalo zokumaketha zenze imiphumela esheshayo eqhutshwa yi-analytics. I-Alteryx APA Platform inikeza isisombululo esilula, sokudonsa nokudonsa esinciphisa ukufinyeleleka kwedatha nokuhlaziywa, futhi ivumela abathengisi ukuthi bahlanganise idatha kusuka emithonjeni yemininingwane ye-Adobe Experience Cloud, kufaka phakathi iMarketo Engage ne-Adobe Analytics, ngemizuzu yokwenza imininingwane ebucayi yokuxilonga kanye izibalo zokubikezela.
Tags: izibalo ze-adobeukushintshaniswa kwe-adobeipulatifomu yesipiliyoni se-adobeaialteryxAlteryx apaInqubo Yokuhlaziya Ezenzakalelayolaphaukuguqulwa kwedijithaliukufunda imishiniUMarketo uyabandakanyekai-analytics yokubikezela